Imveliso yefektri, abaxhasi - China IMVELISO YABASEBENZI
I-ZHD Series (Umbane okanye iPneumatic) Ubuncinane beValve yokuLawula ukuhamba
Iprofayile ye-ZHD yokulawula ikheji evaliweyo kusetyenziswa i-multilevel cage symmetric sleeve contol valve. Igqibezela ulawulo oluphakathi velocitywithin valve, kunye nesandi esinciphise kakhulu esenziwe ngoxinzelelo oluphezulu lwegesi okanye umphunga ngaphakathi kwevalve, uzinzo koxinzelelo oluninzi lokunciphisa ukunciphisa ukuthintela okusebenzayo kuthintelo lwamanzi, yiyo loo nto iveluva yolawulo oluzinzileyo esetyenziselwa ukusebenza koxinzelelo oluphezulu, abathengi banokukhetha Inkqubo ye-disphragm -spring okanye i-pneumatic actuators, njl njl.
I-ZDM Series I-valve yokulawula ngokuzenzekelayo
Iprofayile ye-ZDM uthotho oluzenzekelayo lokuthintela ivalve luhlobo lwesixhobo sokukhusela impompo. Ikhusela ngokuzenzekelayo impompo ye-centrifugal xa umzimba wempompo usenzeka ngokungalunganga komonakalo (ingakumbi ukuhambisa amanzi ashushu ekusebenzeni okuphantsi). Xa ukuhamba kwempompo kungaphantsi kokuhamba okucwangcisiweyo, ukudlula kunokuvula ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba eyona mpompo yokuhamba ifunekayo iphantsi. Nokuba usebenze uvaliwe ngokupheleleyo, oko kukuthi ukuhamba ngokuhamba zero, ukuhamba okuncinci kunokudlula ngokudlula kwakhona okuzenzekelayo. Uxinzelelo r ...
I-ZDL Series I-valve yokulawula ngokuzenzekelayo
Iprofayile ye-ZDL uthotho lweevalve zokuphinda zisebenze luhlobo lwesixhobo sempompo yeprtectiong. Ikhusela ngokuzenzekelayo impompo ye-centrifugal xa umzimba wempompo usenzeka kumonakalo we-cavitation okanye ungazinzanga (ngakumbi ukuhambisa amanzi ashushu ekusebenzeni okuphantsi). Xa ukuhamba kwempompo kungaphantsi kokuhamba okucwangcisiweyo, ukudlula kunokuvula ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba eyona mpompo yokuhamba ifunekayo iphantsi. Nokuba usebenze uvaliwe ngokupheleleyo, oko kukuthi ukuhamba ngokuhamba zero, ukuhamba okuncinci kunokudlula ngokudlula kwakhona okuzenzekelayo. Uxinzelelo ...
ZDT Model oluzenzekelayo yolawulo vana vana
Uchungechunge lwe-ZDT uchungechunge lwe-valve ye-Automstic recirculation luhlobo lwesixhobo sokukhusela impompo. Ikhusela ngokuzenzekelayo impompo ye-centrifugal xa umzimba wempompo usenzeka kumonakalo we-cavitation okanye ungazinzanga (ngakumbi ukuhambisa amanzi ashushu ekusebenzeni okuphantsi). Xa ukuhamba kwempompo kungaphantsi kokuhamba okucwangcisiweyo, ukudlula kunokuvula ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba eyona mpompo yokuhamba ifunekayo iphantsi. Nokuba kusebenza ukuvalwa ngokupheleleyo, oko kukuthi, eyona nto iphambili kukungahambi kakuhle, ubuncinci bokuhamba bunokukhupha ngokudlula. Uthotho lwe-ZDT lunokudlula okukhulu, ...
Intshayelelo yemveliso Uhlobo lwebhaskiti ecociweyo esetyenzisiweyo kumbhobho weoyile okanye enye into engamanzi, ukukhuphela ngaphandle imibhobho yangaphakathi, indawo yesikrini yalelicebo iphindwe kabini kunama-2.5-3.3 amakhulu kunendawo yokuhamba, iyodlula kakhulu uhlobo lwe-Y kunye nohlobo lwefreyimu yohlobo lokucoca ulwelo . Ukuchaneka kokuchaneka yeyona nto iphambili phakathi kweefilitha. Ukwakhiwa kwesikrini kulunge ngakumbi kunezinye iifilitha, kunye nokusebenziseka lula. Umgaqo wokusebenza Abanye oosaziwayo bazakuzisa ...
Bolt Bonnet Isango Valve
Iimpawu zoyilo lweMveliso 1. Zombini uyilo kunye nokwenziwa kwazo kwenziwa ngokungqongqo kulandela i-GB / T 12234, API600 kunye ne-API602. Iimveliso zibonisa ukwakheka okufanelekileyo, itywina elithembekileyo, ukusebenza kakuhle kunye nemodeli entle. 2. Co alloy hard welding umphezulu wokutywina, onxibe ukumelana, ubungqina bokhukuliseko, ubungqina bokungonakali kunye nokuphila ixesha elide. 3. Umphezulu kunye nohlengahlengiso lwamajelo e-shaft shaft afakwe initrogenized ukuze ukhukuliseko lomhlaba kunye nokukrwada okunganyangekiyo. 4. PN≥15.0MPa (Udidi 900), ...
Ushwankathelo lwempompo lwe-CH, inqanaba elinye le-single-suction cantilever centrifugal pump, yimpompo yokusebenza kakuhle edibanisa izibonelelo zenani elikhulu leempompo zobunjineli bemichiza ngokungqinelana neeNkcukacha zobuchwephesha zeCentrifugal Pumps (Class II) GB / T 5656 -2008 (ilingana ne-ISO5199: 2002). Iqukethe iimodeli ezine ngolu hlobo lulandelayo ukuze kuhlangatyezwane neemfuno zomsebenzi: CH imodeli (impeller evaliweyo kunye nokutywinwa ngomatshini) imodeli CHO (impeller semi-evulekileyo kunye mecha ...
Ukudlula kwiseyile yesango lomjelo inezihlalo ezibini ezidadayo ukubonelela ngetywina eliqinileyo ngesango. Ukuzala ngokupheleleyo kuyilo lomjelo kunokuphelisa ukungahambi kakuhle. Uxinzelelo lokwehla alukho ngaphezulu kobude obulinganayo bombhobho.
Iparameters zobugcisa Ububanzi begama ngegama: 3/4 “~ 6” Uxinzelelo lwamagama: ANSI 150LB-4500LB Uhlobo lomzimba ngokuthe ngqo ngohlobo lwendlela, uhlobo lobushushu bohlobo lokusebenza kwe-150 ℃ -450, Iimpawu zokuhamba kweepesenti ezilinganayo, i-Linear Actuator yombane okanye i-ptuatic actuator Ukuvuza ukuhlangabezana ne-ANSI B16. Ukuvuza kwe-104 V (itywina yenqanaba le-VI liyafumaneka) Iimpawu zeValve 1) Ithiyori yokuhambisa izinto ejikelezayo, amanqanaba amanqanaba okunciphisa uxinzelelo. 2) Ukusebenza kwamandla, njalo ...
Yakha Steel Trunnion Onyuswe ngokupheleleyo welding Ball Valve
Iinkcukacha zoMgangatho woYilo: I-API 6D yoqwalaselo loyilo: Ukuwelda okupheleleyo phakathi komzimba kunye nebhonethi, izibuko elipheleleyo okanye ukunciphisa izibuko, uyilo olukhuselekileyo loMlilo, ibhloko kabini kunye nokopha, uxinzelelo loxinzelelo lwendawo, Isitshixo sokulwa nokuqhushumba kunye nezixhobo ezichaseneyo, Uyilo lwepiston kabini, Ukuzikhethela okwenziwe phantsi komhlaba okwandisiweyo kuyilo lobungakanani boBubanzi: 2 ″ ~ 48 ″ Ukulinganiswa koxinzelelo: ANSI 150lb ~ 2500lb Izinto zomzimba: Ezenziwe ngeCarbon Steel Trim Material: A105 + ENP, 13Cr, F304, F316 Operation: Lever, Gear, Motor, Pneumatic,
Side Entry zakha Trunnion Onyuswe Ball Valve
Iinkcukacha zoMgangatho woYilo: Uqwalaselo loyilo lwe-API6D: Izibuko elipheleleyo okanye ukunciphisa izibuko, Ukuqinisekiswa okukhuselekileyo koMlilo, ibhloko yesibini kunye nokuphuma kwegazi, Inaliti yokutywina engxamisekileyo, Ukuzikhusela koxinzelelo, isiQinisekiso se-Blowout-proof, i-Anti-static, Uyilo olukhethiweyo lwe-piston yoyilo lobungakanani: 2 ″ ~ 48 Ukulinganiswa koxinzelelo lwe-：: ANSI 150lb ~ 2500lb Izinto zomzimba: Ubunjani beCarbon Steel, i-Stainless Trim Material: A105 + ENP, 13Cr, F304, F316 Operation: Lever, Gear, Motor, Pneumatic